MAWDUUCA DIGAAGDUUR XILLIGA QABOOBAHA EE BARNAANKA: HEERKULKA, DARYEELKA IYO QUUDINTA - BEERAHA DIGAAGA
Sida loo ilaaliyo digaagdoonka guriga xilliga qaboobaha
Xilliga qaboobaha, digaag kasta waxuu u baahan yahay dayactir gaar ah, digaagduurna maaha mid ka reeban. Caadi ahaan, shimbiraha waxaa la dhigayaa muraayada, laakiin si ay xayawaanka u dareemaan raaxo iyo is-khilaafka midba midka kale, waxaa lagama maarmaan ah in lagu hoggaansamo xeerarka qaar ka mid ah content, kaas oo aan ka wada hadli doonno maqaalkan.
Aad bay muhiim u tahay in la abaabulo xaalado raaxo leh oo loogu talagalay ku noolaanshaha shimbiraha ee barniga. Ka fikir sida loo sameeyo tan.
Xilliga jiilaalka, waxaa habboon in la hubiyo in heerkulka ee barnadu joogto ah. Tilmaamaha ugu fiican ee boodhadhku waa +18 ° S. Xitaa dhibcooyinka aan qiimo lahayn ee labada dhinacba yar iyo weynba waxay si xun u saamaynayaan heerka nolosha ee shimbirta. Tusaale ahaan, marka heerkulku hoos u dhaco, shakhsiyaadka ayaa bilaabi doona inay fuulaan midba midka kale, taasoo ka dhalata shimbiraha daciifka ah ee dhiman kara.
Mawduuca boodhadhka jiilaalka ee barniga iyada oo aan kuleylka lahayn
Nasiib daro, ma aha marwalba in suurtogal ah in la dhigo xayawaanka qolka kulul. Haddii xilliga qaboobaha aaggaaga uusan ahayn mid aad u adag, waad sameyn kartaa rinjiga dibadda. Sidaa daraadeed, derbiyada dusha sare ayaa lagu daboolay xumbo aan qabin qaboojiyaha qaboojiyaha waxayna badbaadin doonaan kuleylka. Haddii aad qorshaynayso inaad dhisato barneheeda, waa inaad doorataa meel laga ilaaliyo qoraalada iyo dabaylaha xooggan.
Waa muhiim! Muhiim ma aha in la dhigo unugyada daaqadaha, sida isbeddelada isbeddelka cimilada hawada (tusaale ahaan, roobka culus, ka dibna qorraxda dhalaalaya), si xun u saameeya feathery iyo sicirada.
Qol aan kululayn, gaar ahaan haddii shimbirku ku jiro baqshad la'aan, waa lagama maarmaan in la sameeyo qashinka diiran ee dabaqa. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa caws ama geedaha qoryaha.
Kuleylka dheeraadka ah
Si loo hubiyo xaaladaha heerkulka ugu fiican ee digaaga, daryeelka waa in la geeyaa kuleylka dheeraadka ah ee barnka. Ujeedadaas awgeed, waxaa loo isticmaali karaa koronto, biyo ama foornada. Maalmahan, inta badan waxaa jira fursad ay ku qabato korontada, sidaas awgeed heerkulka loo baahan yahay waxaa lagu gaari karaa caawinta kululeeyaha korontada. Waxaa lagama maarmaan ah in la dhigo heerkulbeegga qolka oo si joogto ah u hubiyo in tusaalaha uu had iyo jeer yahay heerka +18 ° C.
Marka lagu daro qalabka korontada caadiga ah, waxay badanaa isticmaalaan nalalka infraredkuwaas oo aan awood u lahayn oo kaliya in ay la qabsadaan iftiinka daadinta, laakiin sidoo kale si aad u kululaato shimbirta, oo ay saameyso bactericidal saameyn.
Sidoo kale akhri oo ku saabsan dayactirka jiilaalka ee digaagga, turkiga, turkiga, xamaam.
Qaar ka mid ah jajabyada, si ay u diiriyaan diirimaadka barnka, samee iyada oo aan daaqadaha waaweyn oo ku jira shimbir aan lahayn iftiin. Waa in la ogaadaa in tani aysan ahayn hab lagu guuleysto, tan iyo iyada oo aan lahayn iftiin habboon heerka wax soo saarka ukumaha ayaa si deg deg ah u dhici doona, iyo natiijo ahaan, dhumucduna waxay gebi ahaan joojin doontaa. Weli, waxaa lagu talinayaa in ay jiraan daaqadaha guriga iyo iftiinka qoraxda ee qolka, iyo marka laga reebo tan, waxaa haboon in la daryeelo iftiin macmal ah. Sida kor ku xusan, doorasho aad u fiican waa in la isticmaalo nalalka infrared. Waxaa muhiim ah in ay ka shaqeeyaan hab xadhig ah ilaa 15-17 saacadood maalintii. Sidan oo kale, la'aanta iftiinka ayaa la siin doonaa iyo heerkulka qolka loo baahan yahay.
Baro noocyada iyo noocyada digaagduur: caadi ahaan, Shiinaha oo rinjiyeeyay; Estoniya iyo Fircoon.
Marka lagu daro iftiinka iyo heerkulka qaarkood, waxaa muhiim ah in la hubiyo hawo fiican oo qolka. Caadi ahaan heerkulka baqshiinku aad ayuu uga sareeyaa mooska, sidaas darteed haddii aad xadiddo socodka hawada cusub, shimbirku wuxuu noqon doonaa mid aad u cufan. Neefsashada liidata waxay sababi kartaa jirro joogto ah, maadaama bakteeriyadu iyo fayrasku si dhakhso ah ugu dhufan doonaan qolka. Coolness iyo qoyaanku waxay sidoo kale keeni karaan cudur.
Ma taqaanaa? Dalka Japan, waxaa jira qawaani: kahor bilaabashada dugsiga, arday kastaa waa inuu cunaa 2 ukumo bakeeriga ah - tani waa lagama maarmaan in la hagaajiyo xasuusta, xoojiyo nidaamka dareenka iyo ilaalinta muuqaalka muuqaalka.
Si shimbirku u noqdo mid caafimaad qaba, waxaa lagu talinayaa in lagu qabto hawlo loogu talagalay jeermiska. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay:
ka saar shimbir ka baqashada, halka karinta shimbiraha leh noocyada kale ma u qalantaa;
ku dhaq unugyada isticmaalaya biyo saabuun ah, ku biyo raaci biyo karkaraya;
ku qallaji unugyada dhismaha dharka qalajiyaha.
Marka laga soo galo barnadu waa inay ahaato khilaafka. Waa lagama maarmaan in qolka lagu soo galo, qofku wuxuu istaagi karaa cagihiisa wuxuuna kabi karaa kabaha. Tani waxay yaraynaysaa suurtogalnimada jeermiska soo galaya dusha.
Wixii shimbiraha jiilaalka, waxaa lagu talinayaa in la siiyo doorbididda baqashada ka samaysan qoryaha, maadaama ay u fiican tahay kuleylka.
Unuggu waa inuu buuxiyaa shuruudaha soo socda:
waxaa lagu talinayaa in shimbir loo dhigo "curyaan", sababtoo ah wax kasta oo xayawaannada dibedda ahi saameyn xun ku yeelan doono digaagga, duurjoogtu waxay noqon doontaa dareen, taas oo, markaa, waxay horseedi doontaa hoos u dhac ku yimaada heerka ukunta;
waxaa lagama maarmaan ah in la dhigo qafis sidan oo iftiin badan oo aan ku dhex galin, iyada oo tani ay horseedi karto gardarrada xooggan ee xayawaanka nool. Nalalka la'aanta waxay sidoo kale si xun u saameeyaan shimbiraha - waxay noqdaan kuwo culus, wax soo saarkooda ukumuhu hoos u dhacaan;
Laguma talinayo in la dhiso unugyo furan, maadaama ay jirto suurtagalnimada sare ee qoraalada. Sidaa darteed, baalashu waxay ka dhacaan shimbiraha, wax soo saarku hoos u dhacdo;
ee unugyada xidhan, isbeddelka heerkulka habeenkii iyo maalintuba maaha mid aad u yar, taas oo saameyn wanaagsan ku leh digaagga;
Waa muhiim in la doorto qiyaasta kafateeriga: shimbir kasta waa inuu lahaadaa ugu yaraan 1 mitir oo laba jibbaaran. aagga decimeter.
Waa muhiim! Xulo unugyada qaab dhismeedka si ay u awoodaan in ay kala soocaan raga iyo dumarka leh septum, maadaama aan lagula talin in la wadaago.
Waxaa lagula talinayaa inaad isticmaasho si aad uhesho saqafka. xargaha xumbada. Tani waa arrin aad u muhiim ah, maxaa yeelay shakhsiyaadka qaarkood waxay boodaan oo waxay dhaawici karaan madaxyadooda dul saar adag. Sida qashin, waxaad isticmaali kartaa kaarar qaro weyn, kaas oo la dhigo hay. Wakhti ahaan waxaad u baahan tahay inaad nadiifiso oo aad bedesho lakabka sare. Waa mid aad u muhiim ah in ay jiraan dhowr feedhad iyo cabitaanno ku jira qafiska, si ay shimbiraha oo dhan u helaan cunto iyo biyo waqti isku mid ah.
Video: qaboojiyaha qaboobaha xilliga qaboobaha
Waxa la siinayo digaagduurka xilliga jiilaalka
Waa lagama maarmaan in la daryeelo cuntada saxda ah ee shimbirta. Beeralayda qaarkood waxay doorbidaan quudin diyaar ah, oo laga iibsan karo dukaanka khaaska ah, laakiin marka laga reebo, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo quudin dheeraad ah oo aad muhiim u ah xilliga qaboobaha.
Cuntada barkeed waa inay ku jirtaa inta ugu yar ee suurtogalka ah ee qulqulaya iyo milixda.
Baro wax badan oo ku saabsan waxyaabaha ku jira digaagada guriga.
Raashin maalmeedka waxaa ka mid ah:
sarreen - 30%;
Cuntada kalluunka - 15%;
makuha - 15%;
hadhuudh - 25%;
qolofta qashinka - 5%;
Wixii diyaarinta miraha quudinta dheeriga ah waa la qooyay oo ka tagay meel kulul. Maalmo yar ka dib, caleemaha ugu horreeya waxay u muuqan doonaan - taasi waxay ka dhigan tahay in aad ku dari karto cuntada. Waxaa muhiim ah in aan loo ogolaan in hadhuudhka qalalan - waa inay mar walba qoyaan. Marka lagu daro cuntada muhiimka ah, shimbiraha ayaa u baahan fitamiinada. Beeralayda qaar waxay u koraan salad iyo basasha sanduuqyada, kuwaas oo ay cunaan digaagdarrin leh farxad weyn. Waxa kale oo aad ku dari kartaa cuntada oo ah karootada yar yar, gawaarida, xididdo, kaabaj iyo barandho la kariyey.
Ma taqaanaa? Sanadkii 1990-kii, tijaabadii guuleysiga Ruush-American ah waxaa lagu qabtey suurtagalnimada in digaagga sii kobcaya eber eber. Munaasabaddan waxaa lagu qabtey xaafada Earth.
Video: qaboojiyaha qaboobaha ee barafka
Faallooyinka beeraha digaaga ee dayactirka jiilaalka ee digaaga
Waxaan xajin karaa qaboojiyaha xilliga qaboobaha ee qashinka diiran oo leh shimbir kale. Unugyada ayaa ku dheggan derbiga kor ku xusan. heerkulka hawada ka sarreeya saqafka ayaa aad uga sarreeya midka hoose. Kuleylku waa fiilo koronto leh, laakiin darbiyadu waa hore u kulul yihiin, saqafkana waxaa lagu xajiyaa xajmiga 3mm.
Qolka kulul ama kuleylka, maxaan u sheegi karaa. Waxaan haystaa jikada xagaaga kuleylka kuleylka. Oo waxay ku dhex noolaan doonaan hadhuudhka, laakiinse miis keliya ma leh.
Waxyaabaha ku saabsan boodhashadu maaha mid adag, laakiin waxay u baahan tahay masuuliyad weyn iyo kormeer joogto ah xoolaha. Raadinta dhamaan talooyinka guriga iyo diyaarinta shimbirta, waxaad ku faani kartaa tiro badan oo shimbiro caafimaad leh.